स्काइप अंकित समय बनाम
प्रभावकारी संचार आजको संसारमा महत्त्व महत्त्व छ. या त तपाईं मित्र र परिवारका कुरा गर्न चाहनुहुन्छ वा तपाईं आफ्नो व्यवसाय को कर्मचारीहरु संग जोडिएको प्राप्त चाहनुहुन्छ, के तपाईं आवश्यकताहरु आफ्नो पूरा गर्न मदत गर्न सक्छ कि सिद्ध उपकरण आवश्यक.
विगतमा, मान्छे अरूलाई सम्पर्क गर्न मेलहरू गर्न प्रयोग, तर अब मान्छे भिडियो च्याट मञ्चहरूमा मार्फत भिडियो कुराकानी गर्न रुचि. प्रभावकारी संचार लागि, धेरै कम्पनीहरु आफ्नो भिडियो टेलिफोनी अनुप्रयोगहरू तपाईं विश्व भर जहाँबाट कल गर्न अनुमति कि शुरू गरेका छन्.
यी सबै अन्तरक्रियात्मक सफ्टवेयर बीचमा, दुई अनुप्रयोगहरू सधैं संसारको ध्यान grasped छ. यी दुई प्रतिद्वंद्विता अनुप्रयोगहरू व्यापक अंकित समय र स्काइप रूपमा मान्यता प्राप्त.
चाखलाग्दो कुरा, दुवै अनुप्रयोगहरू (अनुहार समय र स्काइप) कि अधिकारीहरु आफ्नो प्रयोगकर्ता सामाजिक सक्रिय प्राप्त गर्न नै उद्देश्य को लागि डिजाइन, अडियो वा भिडियो कल, पाठ सन्देशहरू के, समूह भिडियो कल र अधिक बनाउन.
तपाईं सजिलै संग आफ्नो स्मार्टफोन सहित विभिन्न उपकरणहरूमा यी अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, ट्याब्लेटको, डेस्कटप, Windows, कुरा हेर्ने, आइपड र धेरै.
सबै प्रयोगकर्ता प्रत्येक अन्य संग सेकेन्ड भित्र बाबजुद क्षेत्र को जोडिएको यी भिडियो च्याट अनुप्रयोगहरू यो astoundingly सजिलो गरेका छन्, दूरी वा समय. तिनीहरूले रहन आफ्नो परिवार संग लिङ्क गरेर तपाईं आफ्नो अवकाश आनन्द वा आफ्नो व्यापार यात्रा ध्यान केन्द्रित गर्न सम्भव बनाएको छ, कर्मचारीहरु वा ग्राहकहरु. दुवै अनुप्रयोगहरू अत्यन्तै पोर्टेबल छन्, ग्राहक अनुकूल र व्यवस्थित.
तर अझै, त्यहाँ जो एक अर्को यी अनुप्रयोगहरू अलग विशिष्ट सुविधाहरू छन्. यस लेखमा, तपाईं प्रतिस्पर्धी सुविधाहरुको विवरण विचार प्राप्त हुनेछ, अनुकूलता को स्तर, एकीकरण, र स्काइप र अंकित समय दुवै को गुणवत्ता. यस लेखमा तपाईंले कुन सफ्टवेयर सूट impeccably आफ्नो आवश्यकता अनुसार निर्णय दिनु हुनेछ.
0.1 स्काइप बारेमा:
0.2 स्काइप को अनुकूलता:
1 स्काइप को सुविधाहरू
1.1 स्काइप को एकीकरण
1.2 स्काइप गुणस्तर:
1.3 बारेमा अंकित समय:
1.4 अंकित समय को अनुकूलता:
2 अंकित समय को सुविधाहरू:
2.1 अंकित समय को एकीकरण:
2.2 अंकित समय गुणस्तर विशेषता:
2.3 मेरो साइटबाट अधिक
सबैभन्दा प्रचलित र सबै भन्दा मांग भिडियो सम्मेलन अनुप्रयोगहरू एक स्काइप छ. यो अनुप्रयोग सुरुमा मा शुरू भएको थियो 2003 र केही वर्ष पछि 2011 माइक्रोसफ्ट कम्पनी यसलाई किनेको. माइक्रोसफ्ट यो सम्झौता गरे $8.5 अरब. यो सफ्टवेयर को आधारभूत विचार यसको प्रयोगकर्ता असीमित भिडियो र अडियो कल सञ्चालन गर्न अनुमति छ.
यस्का साथसाथै, स्काइप पनि आकर्षक भावना र स्टिकर पाठ सन्देशहरू आफ्नो ग्राहकहरु सेवा प्रदान. स्काइप सधैं आफ्नो ग्राहकको आवश्यकता पूरा गर्न केन्द्रित छ. कारण यसको कुशल परिणाम उन्मुख परिणाममा, स्काइप एक विशाल विजय अनुभव छ.
अडियो र भिडियो कल को आफ्नो उच्च परिभाषा संग, स्काइप अन्तर्राष्ट्रिय कल को शेयर को सबै भन्दा आकर्षित गरेको छ. यी सबै अविश्वसनीय सेवा संग, स्काइप सफलतापूर्वक विभिन्न अदालत परीक्षण र बुलेटिनहरु यसको नाम बनाउन व्यवस्थित छ.
स्काइप को अनुकूलता:
स्काइप को सबै भन्दा ठूलो लाभ को छ, यो अनुप्रयोग धेरै यन्त्रहरू लागि काम गर्दछ. तपाईंले यो भिडियो कन्फ्रेंसिंग अनुप्रयोग प्रयोग गर्दा सीमित रहन छैनन्. स्काइप को प्रस्ताव र सेवाहरू मोबाइल फोन सहित सबै उपकरणहरू समावेश, Windows, कम्प्युटर, ट्याब्लेटको, र अन्य खेल मंच उपकरणहरू.
कारण यसको विशाल सेवा र अनुकूलता गर्न, स्काइप सोनी को धेरै ग्राहकहरु छ, प्ले स्टेशन, स्मार्टफोन, Windows, ओएस एक्स उपकरणहरू, एन्ड्रोइड, ब्ल्याकबेरी, सिम्बियन, स्मार्ट samsung टिभी, आदि.
स्काइप को सुविधाहरू
सुरुमा, स्काइप आफ्नो ग्राहकहरु अडियो कल विकल्प प्रदान गर्न डिजाइन भएको थियो. उच्च माग र संचार को परिवर्तन रुझान पछि तर, यसलाई पछि संसारमा तत्काल सन्देश र भिडियो कल भेटी सुरु.
अंकित समय विपरीत, स्काइप मात्र अनलाइन भिडियो वा अडियो कल प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको छैन. यो तपाईं ल्यान्डलाइन वा फोन नम्बर जो कोहीले कल गर्न अनुमति दिन्छ. यो सुविधा जहाँ इन्टरनेट जडान कमजोर वा सुस्त छ सबै मान्छे पुग्न साँच्चै उपयोगी छ.
अनलाइन भिडियो वा अडियो कलको लागि, स्काइप शुल्क केहि गर्छ. तर तपाईंले अन्तर्राष्ट्रिय नम्बर मा कल गर्न चाहनुहुन्छ भने, मोबाइल नम्बर वा ल्यान्डलाइन नम्बर, त्यसपछि तपाईं एक सदस्यता शुल्क तिर्न. स्काइप अफलाइन कलको लागि सदस्यता प्राप्त गर्न आकर्षक योजना प्रस्तुत गर्दछ.
दर फरक तपाईंका क्षेत्र र मुद्रा निर्भर. हामी ल्याण्डलाइन तर अझै पनि एक वैकल्पिक रूपमा स्काइप विचार गर्न सक्छौं, यो अनुप्रयोग यसको प्रतिस्थापन रूपमा कार्य गर्न सक्दैन. प्रमुख कारण मध्ये एक तपाईं स्काइप मार्फत आपतकालीन कलहरू गर्न सक्दैन छ.
स्काइप सक्रिय, तपाईँ या त वाइफाइ इन्टरनेट जडान वा तपाईंको सेलुलर नेटवर्क डाटा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. स्काइप प्रयोग गर्न सुरू गर्न, तपाईं आफ्नो Microsoft इमेल आईडी वा स्काइप आईडी हुनुपर्छ. एक पटक तपाईं आफ्नो स्काइप खातामा लगइन हुनेछ, तपाईं सूची सम्पर्क सफ्टवेयर द्वारा पहिले नै कायम छ जो पाउनुहुनेछ.
तपाईं बस कल गर्न चाहनुभएको प्रयोगकर्ता क्लिक गर्न. तपाईं खोज पट्टी मा उनको नाम लेखेर इच्छित सम्पर्क को कुनै पनि खोजी गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं मनपर्ने तिनीहरूलाई थपेर आफ्नो सबैभन्दा प्रयोग सम्पर्क सूची बनाउन सक्छ.
आफ्नो भिडियो कल समयमा, स्काइप कल म्युट सहित धेरै विकल्पहरू प्रदान गर्दछ, स्विच क्यामेरा, आवाज-मात्र मोड र कल अन्त्य. स्काइप पनि यसको प्रयोगकर्ता धेरै अन्तरक्रियात्मक सन्देश सेवाहरू.
गोपनीयता लागि, स्काइप ब्लक वा सम्पर्क मेटाउन अनुमति दिन्छ. यस्का साथसाथै, यो पनि कुनै पनि प्रयोग सन्देश अनुरोध बेवास्ता गर्न अनुमति दिनुभएको छ भने तपाईं तिनलाई थाहा छैन.
स्काइप को एकीकरण
या त तपाईं एक ओएस एक्स प्रयोगकर्ता वा आइओएस प्रयोगकर्ता छन्; तपाईं स्काइप प्रयोग गरेर आफ्नो ठेगाना पुस्तक र सम्पर्क पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ. स्काइप तपाईं चाहनुहुन्छ कि कुनै पनि नम्बरमा कल फर्वार्ड गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं स्काइप क्रेडिट खरिद गरेर यो सेवा लाभ उठाउनै गर्न सक्नुहुन्छ. स्काइप पूर्ण भिडियो कन्फ्रेंसिंग मंच कि फरक उपकरणहरू को प्रयोगकर्ता एकल सफ्टवेयर प्रयोग गरेर जडान गर्न प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ छ.
दुर्भाग्यवश, स्काइप अडियो र भिडियो कल को राम्रो गुणस्तर प्रदान गर्दैन. कहिलेकाहीं, तपाईंलाई उच्च गतिको इन्टरनेट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं अझै पनि कम संकल्प र shuttering भिडियो कल सामना गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं सप्ताहन्तमा समयमा स्काइप प्रयोग गर्न प्रयास भने यी मुद्दाहरू पनि अधिक जटिल हो. वास्तविक कारण छ, स्काइप प्रयोगकर्ताहरूको असीमित नम्बरमा सबै उपकरणहरू र कारण यसको सेवाहरू भेटी छ, मान्छे एक गुणस्तर मुद्दा सामना. राम्रो कुरा स्काइप को टोली ग्राहकहरु सन्तुष्ट बनाउन यो समस्या समाधान गर्न काम गरिरहेको छ छ.
बारेमा अंकित समय:
अनुहार समय सधैं आफ्नो प्रयोगकर्ता खुसी र सन्तुष्ट बनाउँछ भन्ने प्रमुख सफ्टवेयर को छ. यो भिडियो टेलिफोनी सफ्टवेयर मा एप्पल द्वारा शुरू भएको थियो 2011. यो सफ्टवेयर विशेष iPads सहित एप्पल उपकरण प्रयोगकर्ताका लागि सजिलो बनाउन डिजाइन भएको थियो, आईफोनहरु, आइपड, र Macs भिडियो र अडियो अन्तरक्रियामा आनंद द्वारा interlinked रहन.
अनुहार समय सन्तुष्ट ग्राहकहरु को एक ठूलो बाक्लो टुक्रा आनंद छ. सर्वेक्षण अनुसार, धेरै 70 लाख ओएस एक्स प्रयोगकर्ता र iOS प्रयोगकर्ताहरूलाई अन्य प्रयोगकर्तालाई कुरा गर्न अंकित समय को सहायता लिइरहेका छन्.
अंकित समय को अनुकूलता:
तपाईं एप्पल उपकरणहरू यो सफ्टवेयर मात्र चलाउन सक्नुहुन्छ. तपाईं एक म्याक वा आइओएस मार्फत अंकित समय आफ्नो भिडियो कल सुरु गर्न अगाडि सामना क्यामेरा उपकरण हुनुपर्छ. अनुहार समय सीमित अनुकूलता छ र यसलाई एप्पल उपकरणहरू लागि मात्र पहुँच छ. तपाईं निम्न कुनै पनि छ भने तपाईं अंकित समय प्रयोग गरेर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ
आईप्याड2वा पछि,
आईफोन4वा पछि
4औं पुस्ता आइपड वा पछि
म्याक ओएस एक्स 10.6.6 र पछि
मामला मा आफ्नो उपकरणहरू एक मा निर्मित क्यामेरा छैन, त्यसपछि तपाईं भिडियो कल सञ्चालन सुरु गर्न बाह्य वेब क्यामेरा संलग्न हुनुपर्छ.
अंकित समय को सुविधाहरू:
सुरुमा, अनुहार समय आफ्नो ग्राहकहरु वाइफाइ नेटवर्क जडानहरू मात्र प्रयोग गरेर आफ्नो सेवाहरू लाभ उठाउनै गर्न अनुमति दिन्छ. तर प्रगति र प्रविधिको विकास संग, यसलाई साथै डाटा सेलुलर नेटवर्क प्रयोग गरेर यो अनुप्रयोग चलाउन आफ्नो ग्राहकहरु अनुमति छ.
अंकित समय को एक प्रतिस्पर्धी लाभ छ, स्काइप विपरीत तपाईं आफ्नो खाता प्रबन्ध प्रक्रिया मार्फत जाने छैन. तपाईं एक पटक अंकित समय प्रयोग गर्न सुरू, स्वतः एकीकृत र iOS र ओएस एक्स प्रयोगकर्ताहरूको लागि ठेगाना पुस्तक र सम्पर्क सबै आवश्यक डाटा सिङ्क्रोनाइज.
अनुहार समय प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ. जब तपाईं आफ्नो कल गर्न बटन थिच्न, तपाईं स्विच क्यामेरा सहित विभिन्न उपयोगी विकल्प हेर्न सक्नुहुन्छ, माइक्रोफोन मौन वा आफ्नो कल अन्त्य. स्याउ आफ्नो ग्राहकहरु वीओआइपी सेवा स्काइप भन्ने प्रस्ताव छैन.
अंकित समय को एकीकरण:
स्याउ भिडियो टेलिफोनी सेवा को लागि दुवै उच्च प्रदर्शन सफ्टवेयर र हार्डवेयर एकीकृत गर्न किनारा छ. अनुहार समय एक-श्रृंखला संग परिणामहरू र iSight क्यामेरा "एक चिप मा सिस्टम" दिन डिजाइन गरिएको छ. भिडियो र अडियो कल को सर्व परिणाम प्रदान गर्न, अनुहार समय कुनै पनि कम ब्यान्डविथ जडानहरू संग सञ्चालन गर्दैन.
स्याउ सधैं आफ्नो ग्राहकहरु गर्न प्रिमियम गुणस्तर र उल्लेखनीय परिणाम-उन्मुख अनुप्रयोगहरू ल्याउन कठिन strived छ. अनुहार समय पनि एप्पल को नै दर्शन संग डिजाइन गरिएको छ, तपाईं गरिब भिडियो त्रुटिहरू प्राप्त गर्न सक्दैन र आवाज आफ्नो संचार समयमा खस्छ. अनुहार समय एप्पल को दुनिया को वातावरण अनुसार डिजाइन गरिएको छ.
अंकित समय गुणस्तर विशेषता:
स्याउ सधैं तिनीहरूले प्रस्ताव गर्ने सेवाहरूको गुणस्तर र उत्कृष्टता मा जोड दिए छ. यो अंकित समय यसको प्रतियोगी स्काइप भन्दा राम्रो गुणवत्ता छ कारण जो कारण छ. अनुहार समय अन्तर्राष्ट्रिय स्तर आधारित उच्च गुणस्तरको भिडियो टेलिफोनी सेवा प्रदान गर्दछ.
भिडियो र अडियो कल दुवै लागि, अनुहार समय राम्रो-परिभाषित प्रदान, अटुट, स्पष्ट ध्वनि र चिल्लो गति संग जीवंत तस्वीर.
अंकित समय को यो अचम्मको अनुप्रयोग हाम्रो सम्झनाहरु सुन्दर बनाउन तपाईंले अनुमति दिनुभएको छ, सम्पर्कमा रहन र सन्देशहरू व्यक्त गर्न.
निरंतर र राम्रो गुणस्तर संचार पनि आवश्यक तपाईं व्यक्त गर्न एक साँच्चै महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदा छ, वा तपाईं आफ्नो प्रस्तुति दिन चाहनुहुन्छ वा तपाईं आफ्नो बिक्री पिच आफ्नो ग्राहक विश्वस्त चाहनुहुन्छ र सूची मा जान्छ.
अनुहार समय र स्काइप, दुवै भिडियो वा अडियो कल सञ्चालन लागि अविश्वसनीय अनुप्रयोगहरू छन्. तपाईं एप्पल उपकरणको प्रयोगकर्ता छन् र तपाईं उत्कृष्ट गुणस्तर अंकित समय अनुभव गर्न त तपाईं प्रयोग गर्नुपर्छ चाहनुहुन्छ भने.
विपरीत, तपाईं एप्पल उपकरणहरू को दुनिया को बाहिर मान्छे संग लिङ्क गर्न चाहनुहुन्छ भने स्काइप लागि सबै भन्दा राम्रो निश्चित विकल्प छ.
पीसीको लागि विधमेट डाउनलोड गर्नुहोस् , विन्डोज 10 | 8 |7 | XP
पीसीको लागि पेरिस्कोप डाउनलोड गर्नुहोस् [विन्डोज 10, 8,7र म्याक]